बालुवाटारमा ओली र पाँच नेताबीच सवाल जवाफ – Annapurna News
Pokhara 20	℃
बालुवाटारमा ओली र पाँच नेताबीच सवाल जवाफ
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच नेताबीच शनिबार पौने २ घण्टा छलफल भएको छ ।
शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको छलफलअनुसार सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन पाँच नेता बालुवाटार पुगेका थिए ।
नेताहरुले सचिवालय बैठकका लागि सहमति दिन ओलीलाई लिखित रुपमा आग्रह गरेका छन् । शनिबार नै सचिवालय बैठक तोक्ने प्रयास भएपनि प्रधानमन्त्रीले आफूले सल्लाह गर्नुपर्ने बताएपछि सफल नभएको एक नेताले बताए ।
कार्यदल गठनसँग गडबडी सुरु भयोः प्रचण्ड
छलफलको सुरुवात कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए । उनी सचिवालय बैठकका लागि सहमति दिन लिखित आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर पृष्ठभूमिसहित बोलेका थिए । प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक टुंग्याउने क्रममा सहमतिको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन भएसँगै गडबडी सुरु भएको बताए ।
१० असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले १४ असारमा सार्वजनिक रुपमै भारतले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको र त्यसमा नेपालका नेताहरूले पनि भूमिका खेलेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
१७ असारमा बसेको पार्टी बैठकमा नेताहरूले ओलीको त्यही अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद छाड्न माग गरे ।
यसले स्थायी कमिटी बैठक प्रभावित भयो । दुई अध्यक्षबीच भएको लगातारको छलफलपछि सहमतिको मस्यौदा बनाउन महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भयो । दुबै अध्यक्षले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार प्रस्ताव लगेपछि २६ भदौमा स्थायी कमिटी बैठक सकिएको थियो ।
तर कार्यदल गठनसँगै प्रधानमन्त्री ओली सहमति विपरित चल्न थालेको प्रचण्डले बताएका छन् । स्रोतका अनुसार शनिबारको छलफलमा प्रचण्डले भने, ‘आफूखुसी राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नुभयो, कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति इमान्दार देखिनुभएन ।’
उनले थपे, ‘(स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार) अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्नेबेला गडवडी गर्न खोज्नुभयो । ‘सम्पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ हुन्छ र ? म पनि अध्यक्ष हुँ’ भन्न थाल्नुभयो । त्यसपछि त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै एकलौटी गर्न थाल्नु भयो ।’
स्थायी कमिटीकै निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि बैठक बसौंभन्दा ओली नमानेको उनले बताए ।
प्रचण्डले यसो भनिरहँदा अर्का अध्यक्ष ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरेको एक नेताले बताए । ‘झेली कुरा गर्ने ? मैले बैठक नबस्ने कहाँ भनेको छु ?’ भनेर ओलीले प्रतिवाद गरे ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘बैठक बस्न कहाँ मान्नुभयो’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । एक नेताका अनुसार दुई अध्यक्षबीच केहीबेर नोकझोक चल्यो ।
गौतमको गम्भीर आरोप
त्यसपछि बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम बोलेका थिए । लामै बोलेका उनले सकेसम्म बैठक बस्न बस्नै नमान्ने, बैठक बसी हाले पनि नबोल्ने तथा निष्कर्षमा पुग्नै नदिने र निष्कर्षमा पुगे त्यो निश्कर्ष नै नमान्ने गरेको भन्दै ओलीको आलोचना गरे ।
नेकपाको समस्या व्यक्तिवादी कार्यशैली हो र त्यसको प्रतिनिधिपात्र प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । नेताहरूका अनुसार गौतमले लगाएका आरोपको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवाद गरेका थिए ।
छलफलमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाईँ आफ्नो आत्मालोचना गर्न किन तयार नहुने ? यतिका नेताहरूले किन बिरोध गरे भनेर नसोच्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए भने झलनाथ खनालले बैठक नै नबस्ने र छलफल नै नगर्नु गलत भएको बताएका थिए ।
अंगीकृतलाई उच्च पद असम्भव छ
प्रधानमन्त्री ओलीको भारतलाई सन्देशः सबै विषय संवादबाटै हल गरौं
Annapurna News१५ घण्टा अगाडि